Taananka roobka, Cunto Sifeynta, Uva Bulb -
Jiaxing Nomoy Pet Products Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2008, kaas oo isku daraya naqshadeynta, soosaarka iibka alaabada xayawaannada. Warshadda shirkaddu waxay ku taalaa beerta warshadaha ee Xinhuang, xafiiska iibintuna wuxuu ku yaal muuqaalka wanaagsan ee Degmada Nanhu, Jiaxing. Shirkadda ayaa hadda leh inka badan 100 shaqaale, oo ay ku jiraan wakiilo iibka, cilmi baarista naqshada iyo kooxda horumarinta, shaqaalaha adeegga macaamiisha iyo soo saarista iyo xirxirayaasha shaqaalaha.
suuqa xayawaanka jecel
Naafada Xaraashka Aluminium Alloy NX-06
Magaca Alaabada Aluminium aluminiyuumka xaraashka ah ee sheyga xaddiga sheyga Tilmaanta Alaabta Alaabta Alaabada 23 * 23 * 33cm 32 * 32 * 46cm 43 * 43 * 66cm 45 * 45 * 80cmSilver Alaabada Alaabada Alaabada Aluminium Nambarka NX-06 Tilmaamaha Waxsoosaarka Waxaa laga heli karaa 4 cabbir, oo ku habboon kuwo badan Cayayaanka isu imaatinka dhaqsaha badan, aalado looma baahna Isticmaalka nuugida magnetic iyo tikniyoolajiyadda si loo adkeeyo iyadoo la adeegsanayo mesh aluminium tayo sare leh, cimri dheeri leh Isticmaalidda tikniyoolajiyadda duubista, ayaan waxyeellayn doonin xayawaanka rabbaayadda ah ...
Sheyga Magaca Aluminium Taranka Tilmaanta Gaarka ah 70cm / 100cm / 120cm Dahab / Buluug / Casaanka Qalabka Aluminium Qaabka NFF-55 Feature Waxaa lagu heli karaa 3 cabbir iyo 3 midabo. Qalabka aluminium ee aluminiumka, anti-miridhku iyo waara. Nashqadeynta xajmiga ah ee ballaadhan, si adag u xajista, wax masiibo ah uma leh masaska. Iyada oo leh silsilad bir leh oo bir ah oo 3mm ah, oo leh go 'rivets, nolosha adeegga dheer. Naqshad gacmeedka Ergonomic, fudud oo raaxo leh in la isticmaalo. Hordhac Hilibka masaska leh waxaa laga sameeyay qalab aluminiin tayo sare leh, n ...
Magaca Badeecada Biyo-siiyaha Bixinta Waxyaabaha Sheegashada Alaabada sheyga midabka 18 * 12.5 * 27.5cm Waxyaabaha Alaabada Cagaaran ABS Waxyaabaha Lambarka NW-31 Tilmaamaha Wax soo Saarka ayaa ka baxaya, iskuna eka isha isha biyaha duurjoogta ah. Bamka biyaha qarsada, wax ku ool ah oo qurux badan. Kala shaandheynta laba jeer, tayada biyaha aad u wanaagsan. Hordhac Alaabta Biyaha socodka ayaa la isku hagaajin karaa laga bilaabo 0-200L / H, dhererka isticmaalka waa 0-50cm. Iyadoo 2.5w bamka biyaha hooseeya. Si loo xalliyo dhibaatada biyo-helidda ee y ...
Magaca sheyga Resin ukunta qurxinta qolofta qolofka Gaarka 11 * 12 * 10.5cm Qalabka Resin Qalabka NS-113 Muuqaal Xaqiijin iyo xasilloon, ma fududa in lagu tirtiro jiidis ballaaran oo laga sameeyay resin nontoxin, dhalaalkeedu waa dhalaalaya oo muuqda, aan-lahayn sun ku ah xayawaanka si fudud Fudud, nadiifin iyo waxyeello la'aan, isbadal la'aan Hordhac Ilaalinta bey'ada bey'adda u tahay shey ceyriin ah, ka dib daaweynta heerkulka jeermiska sareeya, kuwa aan sunta aheyn iyo kuwa aan dhadhamin. Habboon oo loogu talagalay xayawaannada yar yar ee gurguurta, s ...
Vine cusub ee Qurxinta Qurxinta Terrarium
Magaca Badeecada cusub ee Qurxinta Qurxinta Terrarium Sinelation Vine Product Sifooyinka Shayada Midabka S 1.2 * 180cm M 1.5 * 180cm L 2.0 * 180cm Badeecada Alaabada Alaabada PVC Waxyaabaha alaabada NN-02 Tilmaamaha Waxsoosaarka Waxaa laga helaa seddex cabbir, oo ku habboon cufcadka leh cabbirro kaladuwan walxaha deegaanka, non- sun ah iyo udgoon Firxanka duufaanka dabacsan ee dabacsan
Nomoypet Ka Qaybgal CIPS 2019
Noofambar 20-keedii ~ 23-keedii, Nomoypet wuxuu xaadiray 23-kii ...
Markaad u abuurato meel aad ugu noolaato ...
Xulashada Xayawaanka Dabjoogta
Cayayaashku waa xayawaan rabaayad ah sababo badan awgood, ma ...
Waqtiga khadka tooska ah: 8: 30 ~ 17: 00, Isniinta ilaa Jimcaha.
Waqtiga kale ee aad ka tagi karto farriin, waxaan kuugu soo jawaabi doonaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.